Wargeys kashifay inuu Farmaajo heysto dhalasho dal kale iyo sababtii uu isaga celiyey Basaborka Mareykanka - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wargeyska New York Times ayaa kashigay sababtii uu Maxamed C/llaahi Farmaajo isaga celiyey baasaboorka Mareykanka iyo inuu hore u qaatay Baasaboor dal kale.
Maqaal dheer oo ay wadajir u qoreen Declan Walsh iyo Abdi Latif Dahir ayaan cinwaan looga dhigay; “Ninkii reer Buffalo ee Soomaaliya haadaanta ka ridaya” ayaa si weyn loogu faahfaahiyey sida wiil dhalinyaronimo ku galay Mareykanka oo wax ku bartay dalkaasi uu Soomaaliya madax uga noqday, halkii uu dimoqraadiyad ka hirgelin lahaana isu bedelay nin kursi u ooman oo muddo kororsi sameystay, taasoo dalka Soomaaliya qarka u saartay burbur iyo dagaallo.
Warbixinta Wargeysja ayaa lagu caddeeyay in Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday e Mohamed Abdullahi Farmaajo uu hore u qaatay Baasaboorka dalka Canada intii aanu noqon muwaadin Mareykan ah; iyadoo Canada ay deganaayeen hooyadii iyo qoyskiisa.
Arrinta xiisaha leh ayaa ahayd in warbixinta lagu xusay inuu Farmaajo baasaboorka Mareykanka iska celiyey kaddib markii ay baaritaan ku furtay wasaaradda maaliyadda Mareykanka oo baareysay dhaqaalaha sharci darrada lagu helo, sida uu Wargeyska kasoo xigay saddex ka mida saraakiisha Mareykanka ee arrintan la socotay.
Farmaajo ayaa la sheegay intii uu ku noolaa magaalada Buffalo ee ka tirsan New York, inuu sabab u noqday burburka urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida ee degaankasi, kaddib markii uu diiday inuu xilka wareejiyo; markii uu muddo xileedkiisu dhammaaday. Arrintaas waxay keentay inay laba qeybood ugu kala jabaan Jaaliyadii.
Qoraalka Wargeyska New York Times ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maxamed Farmaajo intii uu madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya uu ka shaqeeyay “kala qeybin qabyaaladeysan oo dadka Soomaaliyeed uu dhex dhigay; ugu danbeyna isku dayey muddo kororsi keenay in dalkii uu madaxda ka ahaa xilligan qarka u saarmay colaad sokeeye oo uu isagu sababay.
“Sanadkii 2019, Mudane Maxamed Farmaajo wuxuu ka tanaasulay dhalashadiisii ​​Mareykanka, isagoo aan sharaxaad ka bixin go’aanka, laakiin saraakiisha aqoonta u leh arinta ayaa tilmaamay hal arin oo macquul ah. Waqtiga uu Mudane Maxamed dhiibtay Baasaboorkiisa, dhaqaalihiisa waxaa ku socday baaritaan ay sameysay Waaxda Canshuuraha Gudaha ee Mareykanka” ayaa ka mid ahaa warbixinta wargeyska.
Previous articleSafiir saaxiib la ahaa Farmaajo oo Afka furtay, uguna baaqay Farmaajo inuu xilka iska dhiibo
Next articleXOG: Rooble oo qaaday tallaabooyin uu cadaadis ku saarayo Farmaajo iyo rajada uu ka qabo inuu la wareego…